Home News RW Kheyre ayaa lacagtii dholatuska ka kala go’aday. Maanta ayuu markale soo...
RW Kheyre ayaa lacagtii dholatuska ka kala go’aday. Maanta ayuu markale soo codsaday in lacag loo xawilo!!
Safarka Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa ku baxaya qarash aad u farabadan kaas oo laga bixinayo qasnadda Dowladda Dhexe. RW Kheyre ayaa waxa u si hordhac horay ugu diray boqolaal kun oo doolar taas uu ku codsaday in loogu sameeyo barnaamijyo iyo dhoolatus soo dhawayn ah. RW Kheyre ayaa doonayo in loo sameeyo soo dhawayn ka wayn tii Madaxweyne Farmaajo u sameeyeen shacabka reer Puntland. Halka soo dhaweyntii MW Farmaajo ahayd mid qalbiga ka soo go’day oo ahayd rabitaan dadka ka timid, RW ayaa dhankiisa qarash ku bixinaayo in uu iibsado dareenka reer Puntland.
Hadaba lacagtii uu ugu talagay dhooltuskaas ayaa ka kala go’aday. Maanta ayuu markale soo codsaday in lacag loo soo dhigo shirkadaha xaawaaladaha. Sida aan ka helnay qaar ka mida shaqaalaha xafiiska Ra’isal Wasaaraha addun gaaraya $350,000 kun ayaa galabta mar kale loo xawilay. Mid ka mida xildhibaanda ka tiran barlaamaanka Dolwad Goboleedka Puntland ayaa u sheegay MOL in RW Kheyre u muuqado nin walen. Waxa u yiri “war ninkaan halkeed ku hayseen, anagii buu rabaa in uu indha sarcaad nagu rido”
Previous articleWar Deg Deg ah:-R/wasaare Kheeyre oo ka baaqday Safar uu ku tagi Lahaa Garacad (Aqriso sababta)
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo beri ku wajahan degmada Afgooye
Jubbaland oo Gacanta ku dhigtay Sargaal sare oo Al-shabaab ka Tirsan...